Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Ezekiel 13
Nepali New Revised Version, Ezekiel 13
2 “हे मानिसको छोरो, अहिले अगमवाणी कहिरहने इस्राएलका अगमवक्ताहरूका विरुद्धमा अगमवाणी भन्‌। आफ्‍नै कल्‍पनाको अगमवाणी कहनेहरूलाई भन्‌, ‘परमप्रभुको वचन सुन!
3 परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: मूर्ख अगमवक्ताहरूलाई धिक्‍कार, जो केही दर्शन नदेखेर पनि आफ्‍ना आत्‍माको कुराको पछि लाग्‍छन्‌।
4 हे इस्राएल, तिमीहरूका अगमवक्ताहरू त भग्‍नावशेषहरूमा बस्‍ने स्‍यालहरूजस्‍ता छन्‌।
5 परमप्रभुको दिनमा युद्धमा त्‍यो स्‍थिर रहोस्‌ भनी तिमीहरू इस्राएलका घरानाको निम्‍ति पर्खालका चर्केका ठाउँहरू मरम्‍मत गर्न पनि तिमीहरू गएनौ।
6 तिनीहरूका दर्शन असत्‍य छन्‌ र तिनीहरूका जोखना झूटा हुन्‌। तिनीहरू भन्‍छन्‌, “परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ,” तर परमप्रभुले तिनीहरूलाई पठाउनुभएकै होइन। तापनि तिनीहरूको वचन पूरा गरिओस्‌ भनी तिनीहरू आशा गर्दछन्‌।
7 मैले नभने तापनि जब तिमीहरू “परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ” भनी भन्‍दछौ, तब के तिमीहरूले असत्‍य दर्शन देखेका र झूटा जोखना हेरेका होइनौ र?
8 “ ‘यसैकारण परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: तिमीहरूले झूटा कुरा गरेका र असत्‍य दर्शनहरू देखेका हुनाले म तिमीहरूका विरुद्धमा छु, परमप्रभु परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ।
9 मेरो हात ती अगमवक्ताहरूका विरुद्धमा हुनेछ, जसले असत्‍य दर्शनहरू देख्‍छन्‌ र झूटा जोखनाहरू कहन्‍छन्‌। तिनीहरू मेरो प्रजाको सभामा हुनेछैनन्‌, अथवा तिनीहरूका नाउँ इस्राएलका घरानाको सूचीमा लेखिनेछैनन्‌, न त तिनीहरू इस्राएलको देशमा पस्‍न पाउनेछन्‌। तब परमप्रभु परमेश्‍वर म नै हुँ भनी तिमीहरूले जान्‍नेछौ।
10 “ ‘शान्‍ति नहुँदा पनि “शान्‍ति” भनी तिनीहरूले मेरो प्रजालाई बरालेका छन्‌, र जब मानिसहरूले कच्‍चा पर्खाल बनाउँछन्‌ तब यिनीहरूले त्‍यसमा चून लाएर त्‍यो ढाक्‍छन्‌।
11 यसैकारण ती चून लगाउनेहरूलाई भन्‌, “घनघोर वृष्‍टि हुनेछ र ठूला-ठूला असिना बर्सनेछन्‌ र आँधीबेहरी म पठाउनेछु।”
12 जब त्‍यो पर्खाल ढल्‍नेछ, तब के मानिसहरूले तिमीहरूलाई यसो भनेर सोध्‍नेछैनन्‌, “तिमीहरूले पोतेको चून कहाँ गयो?”
13 “ ‘यसैकारण परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: म मेरो क्रोधमा एउटा डरलाग्‍दो आँधीबेहरी चलाउनेछु, र मेरो रीसमा असिना र नाशकारी पानीको बाढ़ी आउनेछन्‌, जसले त्‍यो पर्खाल भत्‍काउनेछ।
14 अनि तिमीहरूले चून पोतेको पर्खाल त्‍यसको जग देख्‍ने गरी भत्‍काएर म त्‍यसलाई भूइँसम्‍मै समतल गरी त्‍यो ढालिदिनेछु। त्‍यो भत्‍काउँदा तिमीहरू पनि त्‍यसको साथमा नष्‍ट हुनेछौ, र परमप्रभु म नै हुँ भनी तिमीहरूले जान्‍नेछौ।
15 यसरी म मेरो क्रोध त्‍यस पर्खालको विरुद्धमा र त्‍यो चूनले पोत्‍नेहरूका विरुद्धमा खन्‍याउनेछु। म तिमीहरूलाई भन्‍नेछु, “त्‍यो पर्खाल अब छैन, त्‍यसलाई चूनले पोत्‍नेहरू पनि छैनन्‌,
16 इस्राएलका यी अगमवक्ताहरू, जसले यरूशलेमको विषयमा अगमवाणी कहे, र त्‍यहाँ शान्‍ति नहुँदा पनि त्‍यसको निम्‍ति शान्‍तिको दर्शन देखे, परमप्रभु परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ’।”
17 “अब हे मानिसको छोरो, इस्राएलका छोरीहरू, जसले आफ्‍नै कल्‍पनाको अगमवाणी कहन्‍छन्‌, तिनीहरूतिर तेरो मुख फर्का। तिनीहरूका विरुद्धमा अगमवाणी गर,
18 र भन्‌, ‘परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: धिक्‍कार ती स्‍त्रीहरू, जसले आफ्‍ना नाड़ीहरूमा बूटी बाँधिदिन्‍छन्‌ र मानिसहरूको प्राण पासोमा पार्न तिनीहरूका कदअनुसार शिर ढाक्‍ने घुम्‍टा बनाउँछन्‌। के तिमीहरू मानिसहरूको प्राण पासोमा पार्ने र आफ्‍नो प्राणलाई चाहिँ बचाइराख्‍ने र?
19 दुई-चार मुट्ठी जौ र रोटीका केही टुक्राहरूका निम्‍ति मेरो प्रजाको बीचमा तिमीहरूले मलाई बिटुलो पार्‍यौ। र झूटा कुरा सुन्‍ने मेरो प्रजालाई झूट बोलेर मर्नु नपर्ने मानिसहरूलाई तिमीहरूले मार्‍यौ, र बाँच्‍नु नपर्नेहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले बचाइराख्‍यौ।
20 “ ‘यसकारण परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: म तिमीहरूका जादूका बूटीहरूका विरुद्धमा छु, जसद्वारा तिमीहरू मानिसहरूलाई चरालाई झैँ पासोमा पार्छौ। म तिमीहरूका हातदेखि ती खोस्‍नेछु। तिमीहरूले चरालाई झैँ पासोमा पारेका मानिसहरूलाई म छुटकारा दिनेछु।
21 म तिमीहरूका घुम्‍टा पनि निकालिदिनेछु, र मेरो प्रजालाई तिमीहरूका हातदेखि छुटाउनेछु। तिनीहरू फेरि कहिल्‍यै तिमीहरूका हातमा शिकार हुनेछैनन्‌। तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्‍नेछौ।
22 तिमीहरूले झूट बोलेर धर्मीहरूलाई निराश तुल्‍यायौ, जसलाई मैले शोकित तुल्‍याइनँ, र आफ्‍नो चाल त्‍यागी दुष्‍टले आफ्‍नो प्राण बचाउला कि भनेर तिमीहरूले दुष्‍टलाई आफ्‍नो खराब चाल नत्‍याग्‍नलाई उत्‍साह दियौ।
23 यसैकारण तिमीहरूले अब फेरि कहिल्‍यै असत्‍य दर्शन देख्‍नेछैनौ अथवा जोखना हेर्नेछैनौ। म मेरो प्रजालाई तिमीहरूका हातदेखि बचाउनेछु। तब म नै परमप्रभु हुँ भनी तिमीहरूले जान्‍नेछौ’।”
Ezekiel 12 Choose Book & Chapter Ezekiel 14